क्यान्सर नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ? यसो भन्छन् विज्ञहरु - NayaNepal News
Home स्वास्थ्य क्यान्सर नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ? यसो भन्छन् विज्ञहरु
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रि–वितरण र सेवनको रोकथामको लागि सरकार कडाईका साथ प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार क्यान्सर काउन्सिल नेपाल र लायन्स क्लब अफ काठमाडौं फेलोसिपको संयुक्त आयोजना र नेपाल टेलिकमको सहकार्यमा आयोजित ‘सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथामको लागि अन्तरक्रिया’ मा बोल्दै सचिव बरालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन–ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि तीन तहकै सरकारबीच पनि सहकार्य हुन आवश्यक रहेको सुनाए ।
कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा. जोस भ्यानगेलेयरले नसर्ने रोगहरु विकसित देशहरुमा जटिल रुपमा देखा परेको सुनाए । नेपालमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्न सकिए मुटु, क्यान्सर, दमलगायत विभिन्न रोगहरु नियन्त्रण हुने उनको विश्वास छ ।उनले क्यान्सर काउन्सिल नेपालले विगत लामो समयदेखि जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको देख्न र सुन्न पाउँदा निकै खुशी लागेको सुनाए । आगामी दिनमा पनि काउन्सिलले यस्ताखाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुलाई अझै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका (कानून) सचिव पुष्करराज नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको ऐन–२०८६ बारे प्रकाश पार्दै सरकारले अब ऐन कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने विश्वास दिलाए । उनले ऐन कार्यान्वयनको लागि सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवाला संघ संस्थाबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘कानून आफैंमा पर्याप्त हुँदैन् । त्यसैले यसको कार्यान्वयनको लागि सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य अनिवार्य छ ।’ लायन्स क्लब ईन्टरनेश्नलका निवर्तमान अध्यक्ष मधुकर कुमार उपाध्यायले क्यान्सर रोग नियन्त्रणको लागि क्यान्सर काउन्सिल नेपालसँग सहकार्य गर्दै देशव्यापी रुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाउने विश्वास दिलाए ।
कार्यक्रममा क्यान्सर काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष रुद्रलाल कडरियाले सूर्तीजन्य पदार्थको रोकथामको लागि नागरिकस्तरबाट गर्नुपर्ने आवश्यक कामको लागि आफूहरुले अभियानको रुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको सुनाए । आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनको विश्वास थियो । उनले भने,‘विकसित देशमा रोग नियन्त्रणको लागि प्राथमिकता दिईने गरिएको छ, विकासोन्मुख देशमा उपचारमा मात्रै खर्च गरिने गरिएको छ । यो दुःखद् पक्ष हो । नेपालमा पनि त्यही गलत परम्परा छ । त्यसैले अब रोग नियन्त्रणको लागि हामीले पनि सशक्त अभियान चलाउनुपर्छ । यो कुरामा क्यान्सर काउन्सिल सुरुवातदेखिनै लागिपरेको छ । आगामी दिनमा पनि अझै प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्छौं ।’
Previous articleसन्नी लियोनी ‘पासवर्ड’को प्रिमियरको लागि भोलि नेपाल आउँदै
Next articleफिरौतीमा गृहमन्त्रीका भाइ पक्राउ
पुदिनाले ल्याउँछ छालामा चमक